AKHRISO: Guulaha Siyaasiga Abiy Ahmed ku Gaaray 100 beri, Kuwa Soomaaliduna Gaari Waayeen..!! | Afrikada
AKHRISO: Guulaha Siyaasiga Abiy Ahmed ku Gaaray 100 beri, Kuwa Soomaaliduna Gaari Waayeen..!!
Afrikada, Muqdisho: Akhristow wax walba oo Soomaaliya ka dhaca waxa aad ogaataa in aysan kama’ Ku dhicin ee ay tahay wax loogu talo galay oo qasad ah.
Dadka siyaasadda haya oo culimo iyo caamo leh ayaa dabka ku shiday dadkoodii waxaana ay xaaasidnimo u huriyeen, u baabi’nayaan, una fadeexaynayaan ummadooda, taasina waa wax iska cad. Alle Quraankiiisa iyo axaadiistiisa ayuu noogu sheegay in ‘aan annagu iskallifno mooyee in cid kale oo nagu mashquulsan aysan jirin’
Tani waa imtixaan nala tusayo, hoos ka akhri sababaha siyaasiga Aby Ahmed 100 beri ummadiisa ugu soo jiiday guulo waaweyn, oo uu m/weynaheena Farmaajo ku keeni waayey caqligaas..Subxaannallaah..!!!
1: Aby Ahmed waa uu duulay waxaanu isagu raadiyay in uu la heshiiyo deriskiisa Eritrea.
(Farmaajo ma duulin kumana soo dhicin niyadiisa in uu xitaa si kedis ah intuu u cid diro uu noo soo dhoweeyo walaalaha Somaliland oo muddo iska go’doonsanaa in uu ku sii adkeeyo mooyee)
2.Aby Ahmed markii la doortay waxa ay Itoobiya soo saartay shidaal.
(Dowladda Soomaaliya in ay wax soo saarto iska daayee waxaa ay xajisan la yihiin xafiisyadii xukuumadii hore uga tagtay, iyagoo horumar la taaban ka gaari la’ dagaalka argagixisada).
Itoobiya waxa ay Carabta iyo Imaaraadka ka heshay Balaayiin doolar oo ay dadkooda ku horumariyeen. Aby Ahmed waxa uu garab istaagey la dagaalanka argagixisada Xuutiyiinta tani oo xitaa isku soo dhoweysay xiriirka iyaga iyo Eritrea iyo in lacag badan ay ka helaan Carabta.
(Madaxdeenna wey ku wareereen iyagoo awoodi waayey in ay argagixisada si caalami ah iyo si gudaha ahba ula diriraan, iskuna soo dhoweeyaan maamul goboleedyada dalkeenna iyo dowladda dhexe.)
3. Aby Ahmed wuxuu xoogga saaray in isagoo oo Farmaajo ka da’ yar uu wax badan ka fahmo siyaasadda gobolka isagoo gaal ah uu nabad kala dhex dhigo gobolka.
(Madaxda Soomaalidu Farmaajo hogaamiyo waxa ay u jiheysteen dhinaca wadan aad u yar oo ‘hal nafar ah’ laguna go’ doomiyay hal arrin oo ah In aysan argagixisada lacag siinin’ taasi oo Farmaajo laga dhaadhicin waayey in uu dhinac iska taago qaatana siyaasadda gobolka iyo tan aqlabiyadda Carbeed oo ah in uu dhexdhexaadnimo ku adkeysto maadaama Qatar aysan bixin wax u dhigma waxa UAE siineyso wadammada gobolka ee nala tartamaya).
4. Aby Ahmed oo ku cusub talada ayaa u adeegsaday siyaasadda iyo danaha Imaaraadka Carabta in uu uga faaiideysto in carabtu isku soo dhoweeyaan Eritrea iyo Itoobiya.
(Dhankeenna siyaasadda Carbeed wey nakala dhantaashay waana soo dhoweysan weynay gobollada naga sii fogaanaya, iyadoo xitaa xoog nalooga qaatay Somaliland, Puntlant, Juballand iyo kuwo kale oo rayigoodu hoos uga janjeero Isbaheysiga Sacuudiga ee dagaalja kula jira argagixisada Xuutiga iyo kuwa gobolka.)
Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinteenna ayaa ilaa haatan wax guul ah 60% gaari la. 40ka ay gacanta ku dhigeen ayaa ah in dowladnimadii aysan weli ka burburin oo ay xafiisyadii iyo canshuuraadkii gudaha si fiican u maareeynayaan ilaa haatan waxaana boqolkiiba 30 guulaha dowladda dhexe dabada ka riixaya AMISOM.
Farmaajo oo weli ugu roon siyaasiyiinta dad cunka ah ee Soomaaliya waa kan keliya ee isku keenay quluubta, hadana weli ‘dad aan la garaneynin’ ayaa ka daba shaqeeynaya isaga oo marba meel talo u raadinaya si uu u xaliyo wixii khaldan. Meelaha uu sii wadi waayey waa kuwo iska cad waxaana ay kala yihiin dib u heshiinta ay ku baaqeyso Somaliland oo uu tabar u la’ yahay, barnaamijkii uu Xasan Sheekh wadi jirey ee dowlad wadaajinta federaalka oo uu dagaal kala horyimid ‘Devolution’ baabi’iyeyna kulankii ‘Madasha Wadatashiga’ ee hogaamiyeyaasha gobollada, isaga oo ku bedelay kulamo aan sidaas u najaxin oo dad aan la garanaynin isugu yimaadaan mar kasta oo la qabtaba.
Hadaba maxaa kalifay in Aby Ahmed uu 100 beri gudahood 2 shimbirood hal dhagax ku dilo, xilli annaga siyaasiyiinteennu rafaad iyo ibtilo ka marayaan in ay Camal wanaagsan la yimaadaan sida diintu fareyso, maxaa ka qaldan SIYAASIYIINTA SOOMAALIDA WELIBA KUWA DOWLADDA DHEXE HADDA HOGAAMIYA ??? War Inteen u raacnaa kuwaan sideese xalku yahay?